AKHRISO: Taariikh nololeedka Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi - Awdinle Online
AKHRISO: Taariikh nololeedka Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi
Cali Mahdi Maxamed wuxuu ku dhashay tuulada cadowuul oo ka tirsan shabeelada dhexe sanadku markuu ahaa 1938.
Cali Mahdi wuxuu wax ku bartay iskoolaadkii Xamar ka jiray. Cali Mahdi 1959 ayaa Qaahira u aaday waxbarasho . Cali Mahdi wuxuu fursad u yeeshay in uu xubin ka noqdo baarlamaanka Somaaliya sanadkii 1969, asagoo noqday qofkii ugu dhalinyaraa ee xubin ka noqda baarlamaanka Soomaliyeed.
Kadib markii uu dhacay inqilaabkii Dawladda shicibka aheyd ee wadanka la wareegay Xooga Dalka Somaliyeed, Cali Mahdi wuxuu dib ugu laabtay shaqadiisi wasaaradda Caafimaadka, halkaas u ku gaaray jago Agaasime Guud.
Sanadku markuu ahaa 1977 Cali Mahdi wuxuu ka ruqseeystay shaqadii Dawladda wuxuuna u wareegay ganacsi.
Cali Mahdi muddadii u dhaxeysey sanadihii 1977-1990 wuxuu noqday nin lagu tiriyo ganacsatada ugu waaweeyn ee wadanka soomaliyeed.
Kadib burburkii Dawladda Maxamed Siyaad Barre, sanadka markuu ahaa 1991, ayaa Cali Mahdi loo magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya. Muddo gaaban kadib waxaa bilowday dagaal sokeeye oo ka dhacay magaalada Muqdishu oo eey isaga hor yimaadeen qeybo raacsan Maxamed Farax Caydiid kaasoo diidanaa madaxweynenimada Cali Mahdi iyo kuwo difaacay Cali Mahdi.
Marxuum Cali Mahdi ayaa ku dhintay da’ada 92-sano.
Previous articleMadaxweyne Hore Cali Mahdi oo geeriyooday
Next articleDowladda oo Aas Qaran u sameeyneysa Cali Mahdi